“Mankanesa aty Amiko” - Henry B. Eyring
“Mankanesa aty Amiko”
Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring
Mpanolotsaina Voalohany ao amin’ny Fiadidiana Voalohany
Nampiseho antsika ny fomba hanakaikezana Azy i Kristy tamin’ny alalan’ny teniny sy ny ohatra nomeny.
Feno fankasitrahana aho miaraka aminareo eto amin’ity fihaonamben’Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany ity. Fiangonany ity. Mitondra ny Anarany eo amintsika isika rehefa miditra ny fanjakany. Andriamanitra Izy, ilay Mpahary, ary tonga lafatra Izy. Mety maty isika ary iharan’ny fahafatesana sy fahotana. Kanefa noho ny fitiavany antsika sy ny fianakaviantsika dia manasa antsika hanakaiky Azy Izy. Indreto ny teniny: “Manakaikeza Ahy dia hanakaiky anareo Aho; tadiavo fatratra Aho dia hahita Ahy ianareo; mangataha dia hahazo ianareo; dondòny dia hovohana ianareo”1
Amin’izao vanim-potoan’ny Paska izao dia ampahatsiahivina ny antony hitiavantsika Azy isika, sy ny fampanantenana nataony tamin’ireo mpanara-dia mahatoky Azy ho tonga namana malalany. Nanao izany fampanantenana izany ny Mpamonjy ary nilaza tamintsika ny fomba hankanesany aty amintsika ao anatin’ny fanompoantsika Azy. Ohatra iray ny fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery rehefa nanompo ny Tompo niaraka tamin’ny Mpaminany Joseph Smith tamin’ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna izy: “Indro ianao ny Oliver, ary efa niteny taminao Aho noho ny fanirianao; koa raketo ao am-ponao ireto teny ireto. Aoka ho mahatoky sy ho mazoto amin’ny fitandremana ny didin’Andriamanitra ianao dia hisakambina anao amin’ny sandrim-pitiavako Aho.”2
Niaina ny fifalian’ny fanakaikezana ny Mpamonjy aho sy ny fanakaikezany tena matetika ahy amin’ny alalan’ny fankatoavana tsotra ireo didy.
Nanana traikefa toy izany ihany koa ianao. Mety tamin’ny nisafidiananao hanatrika ny fivoriana fanasan’ny Tompo izany. Ho ahy dia tamin’ny Sabata iray fony aho tanora izany. Tamin’izany dia nandray ny fanasan’ny Tompo nandritra ny fivoriana natao hariva izahay. Mbola mampanakaiky ahy amin’ny Mpamonjy ny fahatsiarovana andro iray efa mihoatra ny 65 taona lasa izao, rehefa nankatò ny didy hiangona miaraka amin’ny fianakaviako sy ireo Olomasina aho.
Maizina sy nangatsiaka tany ivelany tamin’izay. Tadidiko fa nahatsapa hazavana sy hafanana aho tao anatin’ilay trano fiangonana niaraka tamin’ny fianakaviako tamin’izay hariva izay. Nandray ny fanasan’ny Tompo, izay nokarakarain’ireo mpihazona ny Fisoronana Aharôna izahay ary nanao fanekempihavanana tamin’ny Raintsika any an-danitra ny hahatsiaro mandrakariva ny Zanany sy hitandrina ny didiny.
Nihira ny “Demeure auprès de moi, Seigneur” izahay tamin’ny faran’ilay fivoriana niaraka tamin’ilay toniny tao anatiny manao hoe: “Seigneur, reste avec moi ce soir.”3
Nahatsapa ny fitiavan’ny Mpamonjy sy ny fanakaikezany ahy kokoa aho tamin’izay hariva izay. Ary nahatsapa ny fampiononan’ny Fanahy Masina aho.
Te handrehitra indray ireo fahatsapana ny fitiavan’ny Mpamonjy sy ny fanakaikezany izay tsapako nandritra izany fivoriana fanasan’ny Tompo tamin’ny fahatanorako izany aho. Koa nankatò didy iray hafa aho vao haingana izay. Nandinika ny soratra masina aho. Tao anatin’izany dia nahafantatra aho fa afaka ny hiverina hanana ny Fanahy Masina indray aho hamela ahy hahatsapa ny tsapan’ireo mpianatry ny Mpamonjy nitsangana tamin’ny maty rehefa nanaiky ny fanasan’izy ireo handeha any an-tranony sy hitoetra hiaraka amin’izy ireo Izy.
Namaky ny momba ny andro fahatelo taorian’ny Fanomboana sy fandevenana Azy aho. Nisy vehivavy nahatoky sy olona hafa nahita ny vato nakodiadia lavitra ny fasana ary nijery fa tsy tao ny vatany. Tonga hanosotra menaka ny vatany izy ireo noho ny fitiavany Azy.
Nisy anjely roa nijoro teo akaiky teo ka nanontany ny antony nampatahotra azy ireo, nilaza hoe: